Ingaba kukho nayiphi indlela eqinisekisiweyo yokwakha igunya eliphezulu le-PR le-backlink for e-commerce?
Masibhekane nalo - ukwakha i-backlink ephezulu yegunya le-PR akuzange kube ngumsebenzi olula, ngakumbi malunga ne-e-commerce webstore. Into ekhoyo kukuba ngoku amaninzi amanqanaba amandulo asetyenziswayo akwazi ukwenza kakuhle. Yintoni enye - enokuba yingozi nakwiprojekthi ye-e-yorhwebo. Ngoko, ngaphantsi ndiza kubhala izikhokelo ezininzi ezibonisiweyo kunye nomxholo kunye neendlela ezisisiseko zokufikelela kwimpumelelo ekugqibeleni ufumane igunya eliphezulu le-PR emva kwe-website yakho. Apha azinjalo-izikhokelo ezicacileyo, iingcali zengqungquthela, kunye nokubhengezwa kwabavakalisi.
Kodwa ngaphambi kokuba nantoni na enye, masiyihlolisise kwakhona - yiyiphi intengiso ye-e-commerce. Khumbula, i-SEO isoloko isitshela ukuba umxholo womgangatho uyinkosi, akunjalo? Ngoko idibanisa isakhiwo! Ndiyathetha ukuba akukhona nje ngokudala umxholo wesandi. Ukufumana ulawulo oluphezulu lwe-PR ngokulandelelana kwakho kunye nomxholo wakho, ufuna isicwangciso esifana nale:
ukuchonga iinjongo zomxholo wakho - khetha phakathi kweendlela kunye nokuguqulwa;
ucinge nge "client client", iimfuno zakhe, iimvakalelo kunye neenjongo zakhe;
khangela abachaphazeli bamashishini kunye nabo;
umise umxholo ochaphazelekayo kwaye wenze ukuba ubonakale ngokubonakalayo;
musa ukulibala ukusebenza kumgangatho wokuqulunqwa kokuqukethwe ngaphambi kokuba kuphile;
khuthaza kwaye ubuyisele kwakhona iimpahla eziphambili zomxholo wakho;
yenza ishedyuli yokuphinda ipapashwe ngeziganeko ezizayo.
Izikhokelo ezigqwesileyo ezigqibeleleyo
Akukho nto inceda ngakumbi ukwakha i-backlink ephezulu yegunya le-PR kunokwenziwa kakuhle kunye nophando olupheleleyo olupheleleyo. Ndiyathetha ukuba xa umntu efuna ukuva ilizwi langempela le shishini-kutheni akufanele ukuba ube emva kwakho konke? Yonke into oyifunayo apha kukutyalomla ixesha kunye nomzamo wokwenza enye. Noko ke, ungaziva udidekile, nangona kunjalo, akufanele ube yinto ekhethekileyo. Khawucinge nje ngomqeqeshi okanye umgcini-makhonkco yonke into kwaye unike abantu abantu bangcono kakhulu. Ukuba usacinga ngethuba lokutshala imali ngexesha lakho, ndikuqinisekisa ukuba ngokuhamba kwesikhathi isikhokelo esiqinileyo siza kukuzisa ulawulo lwe-PR oluphezulu lwe-backlinks ngexesha elide.
Iingqungquthela zengcali azikho nje indlela eqinisekisiweyo yokufumana i-backlink ephezulu yegunya le-PR kodwa yenza ukuphumelela kokufikelela kunye nokwakha ubudlelwane obuqilileyo kunye nabaxhasi bakho. Yaye yonke into ilula kakhulu kunokuba ungacinga ngoba ubuqhetseba kukukhetha inkcazo efanelekileyo kunye nengxaki. Emva koko, khetha imibuzo emibini ukuba iingcali zakho ziphendule. Ngaloo ndlela, gcinani engqondweni ukuba injongo yakho kukunika impendulo enzulu okanye isisombululo ngesinyathelo-sinyathelo kwimeko ethile. Xa sele yenziwe - mema nje ukufakelwa kweengcali ezivela kumashishini, kwaye uyenziwe.
Ukudala umxholo ophezulu-mveliso ngokukodwa ngokukodwa kwiimpapasho ze-intanethi bekuyeyona ndlela eqinisekileyo yokufumana ezinye izikhundla eziphezulu ze-PR.Okufana nokuthengiswa kwinqaku lokudala kwinqanaba le-school, ukubhengezwa kwabavakalisi lubuhlobo obuzuzisayo obuhlala lunika amathuba amaninzi kumacala omabini. Kukho apho izikhokelo zakho zokubhaliweyo ziqala. Kwaye konke okufunayo apha kukuhlakulela ubudlelwane obuhle kunye nabagqugquzeli bamashishini abajolise kuyo, benze ukuba bathande umxholo wakho, uyithumele, kwaye ngokuqinisekileyo ufumane isibini esiphezulu segunya le-PR elibuyisele kwiwebhusayithi yakho Source .